ScummVM: enderera pamwe nekuvandudzwa kwechirongwa ichi chemitambo | Linux Vakapindwa muropa
Ndakatotaura nezvake ScummVM chirongwa mune ino blog, ino ndiyo nguva yekutaura pane dzimwe nhau dziri kuuya. Ichi chirongwa chine chinangwa ndechekuti iwe ugone kumutsa hwakawanda hwemitambo yemavhidhiyo uye kushandisa maawa ekunakidzwa paLinux.
Iwe zvechokwadi uchayeuka mimwe mitambo yemavhidhiyo yakagadzirwa ne Macromedia ManagerZvakanaka, ikozvino ScummVM yakaisa mune ino puratifomu rutsigiro rwekutanga kuchengetedza aya mazita ari mapenyu. Pamusoro pezvo, iri yemahara zvachose uye yakavhurwa sosi, iine nhamba hombe yemazita anoenderana, kubva kumitambo yekushanya uye mapuratifomu, kutamba-basa, nezvimwe. Ehezve, iwe uchafanirwa kunge uine aya emavhidhiyo mitambo kuti ugone kuamhanyisa, nekuti iwo haana kuisirwa.
Kunatsiridzwa kuri kuitwa kunatsiridza kutsetseka uye kune ruzivo rwevashandisi futi. Nechivandudziro chazvino, icho timu yekusimudzira yanga ichishandira kwemakore mashanu apfuura, rutsigiro rwakaziviswa rwemazita zvichienderana neMacromedia Director 5, senge Spacehip Warlock. Kunyangwe mitambo inoenderana neMacromedia Director 3 inogona kushanda neL-ZONE. Uye ivo vanoenderera pamwe nekuvandudzwa kweMukuru 3 uye Director 4, vachipa mukana wezita rakadai seJourneyman Project, Sangana neMediaBand, Chop Suey, nezvimwe.
Macromedia Director yaive multimedia yekuvandudza software yekugadzira zvinokwanisika zvirongwa zvakapfuma mune multimedia zvemukati, senge mimwe mitambo yevhidhiyo yenguva iyoyo. Sezvo yakave chikamu cheAdobe, chirongwa ichi chaizotumidzwa zita rekuti Adobe Director kubva muna 2008. Muna 2013 vhezheni yazvino yaizoburitswa, uye muna2017 sarudzo yaizoitwa yekusiya budiriro.
Vari kutsvagawo rubatsiro ku gadziridza yako Wiki nezvitsva muaya ScummVM Director-based mazita. Pasina kupokana, basa rinoshamisa zvechokwadi nevose vanobatsirana navo uye rinozofadza vese avo vanoda kupokana kana mazita echinyakare, kuti iwe ugone kuita kana kushuva kuchikukwira ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » ScummVM: ramba uchigadzirisa
Nepo Firefox ichitadza kududzira mapeji, Vivaldi yatobvumidza kushandura sarudzo